ထက်မြက်ပါပေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် | https://khaingkyawsanmusics.wordpress.com
← ချစ်ခွင့်ပေးပါ တေးစီးရီးသီချင်း(ဗမာတေး)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စကားတစ်ခွန်းဟာ ဘယ်လောက်ထိ ထိရောက်လဲ မရောက်လဲတော့ မသိဘူး။ရခိုင်ပြည် အစိုးရအနေနဲ့ လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်မှာ ဘင်္ဂလီလူဦးရေ အဆမတန် များပြားလာတာကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ ဘင်္ဂလီကုလားတစ်အိမ်ထောင်လျှင် ကလေး နှစ်ယောက်ထက် မယူရန် တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုးံတတ်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဒေသရအမိန့်တစ်မိန့်ထုတ်ပြည်ခဲ့ပါသည်။အဲဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရခိုင်ပြည်မှာ ဘင်္ဂလီမွတ…်ဆလင်တွေ ခလေးနှစ်ယောက်ပဲ မွေးရမယ်။တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုးံရမယ်လို့ အမိန့်ထုတ်ပြည်တာဟာ ရခိုင်ပြည်အစိုးရအနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး မီဒီယာကနေ စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုက်နက် ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုးံ အလုပ်တွေ ရှုပ်ကုန်ကြရပြီ။
ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ် ၊ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဘုမ္ပိနက်သံမြေဖြစ်တဲ့ အဖရခိုင်ပြည် နှင့်တကွ အမျိုးဘာသာသာသနာ မတိမ်းကော မပျောက်ပျားသွားအောင် ဆန္ဒ အသိစိတ်တွေနဲ့အန္တရာယ်ဟူသမျှ မကျရောက်စေရန် ဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ ခေတ်သစ်နယ်ချဲ့နည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လူလူချင်း ၀ါးမျိုမှုတွေဖြင့် ဘင်္ဂလီမွတ်ဆလင်တွေက အကွက်ကျကျ စီစဉ် လုပ်ဆောင်နေခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန် ရခိုင်ပြည်အစိုးရ၏ အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထောက်ခံတဲ့အနေဖြင့် ရခိုင်လူထုတွေက မိုးရာသီအတွင်း မိုးတွေ တစ်အား သဲကြီးမဲကြီးရွာနေတဲ့ကြားက အမျိုးဘာသာသာသာနာကို ကာကွယ်လိုစိတ် အပြည့်ဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြရသည်။ထမင်းတစ်နပ်စားရဖို့ မနည်း ရုန်းကန်နေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဒဏ်ကို ခါးစည်းခံနေရသည့်ကြားမှ ဒေါ်စုကြည်နှုတ်လေးက ဟလိုက်သည့် စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့် ၀မ်းရေးကို ဘေးချပြီး အမျိုးသားရေးကို ရှေ့တန်းတင် ဘာသာသာသာနာကို ကာကွယ်လိုစိတ်ဖြင့် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ရပြန်ပါပြီ။ဒေါ်စုကြည် တော်ပါပေတယ်။အစွန်းလည်း ထက်ပါပေတယ်။သို့ပေမဲ့ တစ်ခုတော့ ပြောပါရစေ။
လူမျိုးတိုင်း လူမျိုးတိုင်းမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်စိတ်၊နိုင်ငံကို ကာကွယ်လိုစိတ်တော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒေါ်စုကြည်လည်း အဲဒီလူသားတွေလိုပဲ နိုင်ငံချစ်စိတ်တော့ ရှိမှာပါ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အဖေ ဦးအောင်ဆန်းဟာလည်း နိုင်ငံကို ချစ်စိတ်၊တိုင်းပြည်ကို ချစ်စိတ်ရှိလို့ နယ်ချဲ့သမားတွေဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်၊ဂျပန်တွေကို တက်တက်ကြွကြွ မားမားမတ်မတ် ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်ပြီးတော့ တော်လှန်မောင်းထုတ် ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။
နောက်တစ်ခု မေးပါရစေ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားကျွေးရွာဆိုတာကြီးကို ရောက်ဖူးရဲ့လား။အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးကြီး(၈)မျိုးပဲ အဓိကအနေနဲ့ ပြထားပါတယ်။အဲဒီမှာမှာ ကချင်ဆိုရင် ကချင်တိုင်းရင်းအနွယ်၊ကယားဆိုရင် ကယားတိုင်းရင်းအနွယ်၊ကရင်ဆိုရင် ကရင်တိုင်းရင်းအနွယ်၊ချင်းဆိုရင်လည်း ချင်းတိုင်းရင်းအနွယ်၊ရခိုင်ဆိုရင်လည်း ရခိုင်တိုင်းရင်းအနွယ်၊မွန်ဆိုရင်လည်း မွန်တိုင်းရင်းအနွယ်၊ဗမာဆိုရင်လည်း ဗမာတိုင်းရင်းအနွယ်၊ရှမ်းဆိုရင်လည်း ရှမ်းတိုင်းရင်းအနွယ် များဆိုပြီးတော့ ပြသထားပါတယ်။
ကျွန်တော်က ရခိုင်လူမျိုးတစ်ယောက်ဆိုတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အမျိုးအနွယ်ကိုပဲ ပြောပါမည်။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများထဲမှာ ရခိုင်၊သက်၊မြုံ၊ခမီး၊ဒိုင်းနက်၊မရမာ၊ကမန်၊တို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။မလိုတဲ့လူမျိုးတွေ ဘင်္ဂလီတွေကိုတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအဖြစ် စွတ်အတွင်း မသွတ်သွင်းလိုက်ပါနဲ့။ဒေါ်စုကြည်ပြောပြောနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကြီးကို နားလည်ပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အမျိုးသားရေး မရောထွေးပါစေနဲ့။”အမျိုးသားရေးသည် ပထမ လူ့အခွင့်အရေးသည် ဒုတိယ”ပါ။ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်မှာ ကျွန်တော်နေမယ်။ပြီးရင် ဒေါ်စုကြည်ကို ကျွန်တော်ကန်ထုတ်မယ်ဆိုရင် ဒေါ်စုကြည် လက်ခံနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ အရင်ဆုးံ တွေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေအရေး ရခိုင်ပြည်အရေးတွေမှာ ၀င်မွှေနှောက်နေရအောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရခိုင်ပြည်ကောင်းစားရေးအတွက် ဘာတစ်ခု လုပ်ပေးဖူးပြီလဲ။
အခုချိန်ထိ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေဘက်က မပါပဲ ဘင်္ဂလီကုလားတွေဘက်ကနေ မားမားမတ်ရပ်တည်ပြီး ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုပဲ အပြစ်မြင် တစ်ဘက်သတ်ပြောဆိုနေတာဟာ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို မုန်းတီးနေလို့လား။ဘာကြောင့်ပါလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။(ခိုင်ကျော်ဆန်း)
2 Responses to ထက်မြက်ပါပေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	Hla Shee says:	June 6, 2013 at 8:20 am
You are right. But she can’t give your answer, bcz she can’t do anything and she didn’t know anything about Rakhing. She know only about according to her learn in her school.
Reply	Nyi Nyi says:	June 6, 2013 at 5:47 pm
nyinyi Min Kha Lar Par . Reply	Comment များပေးနိုင်ပါသည်။သင်ပေးခဲ့သောComment များအား ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Cancel reply	Enter your comment here...